ဥဗျိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Range of E. garzetta Breeding Resident Non-breeding Vagrant (seasonality uncertain)
ဥဗျိုင်းကို ဗျိုင်း ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ဗျိုင်းကို မြင်ဖူးသူများသော်လည်း အမြင်ရများသော ဗျိုင်း၏အရောင်မှာ အဖြူသက်သက်ဖြစ်သည်။ ဗျိုင်း၌ မွဲပြာပြာ ညိုတိုတိုအရောင်များလည်း ရှိသေးသည်ကို သိထားသင့်ပေသည်။ ထို့အပြင် ဗျိုင်းသည် ရာသီဥတုကိုလိုက်၍ အရောင်လည်း ပြောင်းလဲတတ်ပေသည်။ ဗျိုင်း၌ ရှည်လျားသော ခြေတံနှင့် လည်းပင်းရှိသည်။ ထို့ပြင် ရှည်လျားပြီးလျှင် ချွန်ထက်သော နှုတ်သီးလည်း ရှိသည်။
ဗျိုင်း၏ ကိုယ်အလျားမှာ ၃၅ လက်မရှိ၍ မိတ်လိုက်ချိန်မဟုတ်သော အခါတွင် နှုတ်သီး၏ အရောင်မှာ အဝါဖြစ်သည်။ ဗျိုင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဆိတ်ငြိမ်စွာ နေလေ့ရှိသော်လည်း စ၍ပျံချိန်တွင်မူ အော်လေ့ရှိသည်။ မိုးတွင်းအခါ၌ စပါးစိုက်ပျိုးထားသော လယ်ကွက်များတွင် ဗျိုင်းများကို အတွေ့ရများ၏။ စပါးများ ရိတ်ပြီး သောအခါတွင် မြစ်၊ ထုံးအိုင်နှင့် ချောင်းများသို့ ရွှေ့ပြောင်း သွားတတ်ကြသည်။ ဗျိုင်းသည် လယ်ကွက်ထဲတွင် လျှောက်၍ ကနန်း၊ ပိုးတုံးလုံး၊ ပေါက်ဖတ်နှင့် ခူများကို ဖမ်းဆီး စားသောက်၏။ အချို့ ဗျိုင်းကမူ လယ်ကွက်ထဲ၌ အစာစားနေသော ကျွဲနွားများ၏ နောက်သို့ တစ်ကောက်ကောက် လိုက်ပြီးလျှင် ပျံတက်မြူးတူးသော ပိုးမွှားများကို ထိုးဆိတ်စားသောက်သည်။ ထို့အပြင် ကျွဲနွားများ၏ အပေါ် တွင် နားနေကာ ကျွဲနွားများ၏ မျက်စိနှင့်နားရွက်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပိုးမွှားများကို ဖမ်းယူစားသောက်သည်။
ဒီရေတက်လာချိန်တွင် ကမ်းနှင့် ကိုက်နှစ်ရာ သုံးရာခန့်ဝေးသော ရွှံ့နွံများအတွင်း ဗျိုင်းများအုပ်နှင့်ချီ၍ ရှိနေကြသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ အေးသောရာသီဥတုများတွင် ပဲခူးရိုးမဘက်ရှိ သဲချောင်းများတွင် သွားလာ ကျက်စားနေကြသော ဗျိုင်းများကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဖြူဖွေးလှပသော ဗျိုင်းမွှေးများကို လိုချင်သော အချို့လူများသည် လူ၏ရန်သူမဟုတ်သော ဗျိုင်းများကို သတ်ဖြတ်လေ့ရှိကြသည်။ အမှန်မှာ ဗျိုင်းသည် စပါးပင်များကို ဖျက်ဆီးသော ပိုးမွှားများကို သုတ်သင် ရှင်းလင်းပေးသဖြင့် လူ၏အကျိုးကိုပင် ဆောင်ပေးသေးသည်။ စပါးပေါ်ချိန်တွင် စပါးကွင်းများကို ဗျိုင်းများ လာရောက်စေရန်ကိုပင် လယ်သမားများက ဖန်တီးပေးသင့်သည်။
ဗျိုင်းသည် မိုးတွင်း၌ အုပ်ဖွဲ့၍ သားပေါက်လေ့ရှိသည်။ ဗျိုင်းကို ကမ္ဘာအနှံ့အပြား၌ တွေ့နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင်လည်း ဗျိုင်းကို တွေ့နိုင်သည်။ ဗျိုင်းသည် ဆီကိုနီအီးဖေါမီး မျိုးစဉ်တွင် အာဒီဒီး မျိုးရင်း၌ ပါဝင်ပြီးလျှင် ယင်းကို ပါဏဗေဒ အလိုအားဖြင့် အီဂရက်တား အယ်လဗားမိုဒက်စတား ဟု ခေါ်သည်။
↑ BirdLife International (2015). "Egretta garzetta". IUCN Red List of Threatened Species 2015. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T62774969A67367671.en.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဥဗျိုင်း&oldid=718627" မှ ရယူရန်
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
နီပေါနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။